Hanta RAMAKAVELO : Mankalaza jobily, hizara ireo soa azony hatramin’izay
Rtoa Hanta RAMAKAVELO no entina aminao mpamaky gazety Jejoo anio. Renim-pianakaviana izy, mpampianatra sy mpampiofana momba ny fahaiza-mitarika sy ny fampivoarana ny maha-olona eto amintsika ihany koa.
Mamiratra amin’ny alalan’ny fivoizany ny toe-tsara mahay mijery lafin-javatra tsara sy ny fametrahana tantaram-piainana mahomby, mahafinaritra Rtoa Hanta RAMAKAVELO. Izany ihany koa no tiany ampitaina amin’ny mpamaky …
Renim-pianakaviana manan-janaka 4 mianadahy rtoa Hanta Ramakavelo. Teo amin’ny fiainan-tokantrano dia efa niaina zavatra mafy izy, amin’ny maha-reny, dia ny fahafatesan’ny zanany, izay mbola vao 9 taona monja tamin’izany. Teo ihany koa ny aretina mitarazoka nanjo ny zanany hafa. Nandraharaha sy nitantana orinasa izy, ka nampizaka izay tsy nety teo amin’ny asa, tany amin’ny ankohonana. Tsy nahasakana an’ity andriambavilanitra ity tsy hitraka anefa izany, raha ny filazany : “tsy mora ny miatrika an’izany mamoy zanaka sy ny hoe : rava ny orinasa natsangana, kanefa mila jerena ny lafin-javatra hafa dia avadika ho fitahiana ho an’ireo zanako mbola velona izany fahoriana izany.”
Mpampianatra, mpampiofana, mpanao asa soa, mpanoratra, mpihira, …
Fantatra ihany koa eo amin’ny tontolon’ny fanofanana sy ny fampivoarana ny maha-olona rtoa Hanta Ramakavelo. Efa ho 28 taona izy izao no nilomano tao anatin’izay sehatra izay. Babon’ny haiteny sy ny literatiora ihany koa izy, ka miangaly an’izany ao anatin’ny famoronana asa soratra sy hira ary tononkalo. Miisa 15 ireo karazana boky efa navoakany hatramin’izao ary amin’ny teny malagasy avokoa, izay nambarany fa efa tsy tazana eny amin’ny tranom-boky ny ankamaroany fa efa lany. Maherin’ny 40 kosa ireo hira efa navoakany, mitory ny hatsaran’ny fampivelarana ny maha-olona sy ny fahaiza-mitarika ary mifanaraka amin’ny kolontsaina malagasy, tsy mandika ny finoana kristianina, kanefa koa ekena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatra ireo andraikitra mankadiry sahaniny ireo dia miaina amin’ny fanaovana asa soa ihany koa rtoa Ramakavelo. Namorona sy mitantana fikambanana mpanao asa soa manohana ara-tsakafo sy mitsabo ireo fianakaviana sy ankizy sahirana any ambanivohitra lavitry ny tanàn-dehibe izy.
Amin’ity taona ity no mankalaza ny faha-50 taonany rtoa Ramakavelo. Amin’ny alalan’ny fizarana fahasoavana, fahalalana, torohay… no entiny mankalaza izany, hoy izy raha nitafatafa taminay : “Ireo soa rehetra voaangoko sy nomena ahy tao anatin’izay taona maro be rehetra izay dia ho zaraiko amin’ny hafa, hahafahan’ny rehetra manana fiainana mahafinaritra, mivelatra ary indrindra manana fijery lafin-javatra tsara”. Ankoatra ny fifampizarana dia havaozina sy hatontan-drtoa Ramakavelo avokoa ireo boky miisa 15 efa vitany hatrizay, hahafahan’ireo mpamaky vaovao mianoka izany. “Te hijoro vavolombelona koa aho, hanehoako amin’ny maro fa azo atao tsara ny mamadika ny lohasaha ho lasa loharano miboiboika fahasoavana, ka na mafy aza ny ady atrehina dia mila mahay misintona ny lesona sy ny zavatra tsara atolony”, hoy izy namarana.
Mahatsara tarehy ny fifaliana
Raha vao jerena ety ivelany rtoa Hanta Ramakavelo dia andriambavilanitra malagasy, manana endrika tanora lalandava. Rehefa nanontaniana mikasika ireo paipaika fikoloana endrika ny tenany dia namboraka fa ny fikolokoloana ny toe-po ao anaty mba ho faly no hananana hodi-tava mirana. Tsy vitan’izay fa mamokatra tsiry mpanentana manatsara ny hoditra, tsy mampikentrona tarehy ary manadio azy amin’ny fomba voajanahary ihany koa ny vatana. “Mihavao sy mihatsara ny sela eo amin’ny tarehy rehefa halavirina ny rarin-tsaina, ka mitsiky sy mitraka hatrany”, hoy izy. Ankoatra ireo dia manokana 20 minitra hitoniana isan’andro izy, tao anatin’ny 33 taona, ka laniany amin’ny famakiana Soratra Masina izany fotoana izany. Na izany aza, nilaza rtoa Hanta Ramakavelo fa manatona “salon de beauté” ihany, saingy tena mahalana sy amin’ny fotoana hamonjena lanonana manokana.
Isaorana rtoa Hanta RAMAKAVELO nivahiny teto amin’ny Jejoo anio.